हामी किन ? - Nepal's No. 1 Agriculture News Portal | कृषि डेली
Home हामी किन ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि सबैभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित रहेको क्षेत्र हो । कृषिले नेपालको कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपीमा करिब ३३ प्रतिशत योगदान छ । कृषि नेपालको परम्परागत आर्थिक आधार हो । ३० वर्ष अघिको अवस्था हेर्ने हो भने कुल जनसंख्या को ९०.५ जनसंख्या कृषिमा आश्रित थियो ।
नेपालको जनगणना, २०६८ का अनुसार कृषि क्षेत्रमा ७३.५ श्रमशक्ति काम गरिरहेको छ । कृषि नेपालमा रोजगारीको मुख्य आधार समेत बनेको छ । बहुसंख्यक मानिसहरू कृषि पेशामा आवद्ध छन । यो हकदार व्यवसायको रूपमा समेत रहेको छ । कृषि योग्य भूमि कृषक परिवारको अचल सम्पत्तिका रूपमा रहेको छ । ७३.५ मानिस काम गर्ने क्षेत्रमा यो अनुपात भने न्यून हो । यसबाट के देखिन्छ भने कृषि व्यवसाय अँगाल्ने हरूमा गरिवीको मात्रा बढी छ ।
फेरी ८३.५ मानिसहरू ग्रामीण भेगमा बस्ने र ती मध्ये अधिकांशको पेशा कृषि नै रहेको छ । गरिबीको मात्रा गाउँमा बढी भएको तथ्यले पनि कृषि व्यवसायीहरू बढी गरीब छन भन्ने देखिन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सामान्य कृषक र सरकारको बीचमा पुलको काम गर्नका लागि हामी आएका छौ । नेपालको विकासका लागि कृषिलाई आधुनिक तरिकाले अबलम्बन नगरीकन सम्भव छैन ।
कृषिलाई आधुनिक बनाउनको लागि सामान्य कृषकलाई पनि प्रविधिको जानकारी अत्यावश्यक छ । एक्काइसौ शताब्दिमा हरेक नेपाली नागरिकको हातमा स्मार्ट फोन रहेको छ । हरेक नेपाली नागरिक सोसल मिडियासँग आबद्ध रहेका छन् । यसैको उच्चतम प्रयोग गरेर हामी कृषिसम्बन्धी हरेक जानकारी कृषकको हातमा पुर्याउने प्रयास गर्नेछौ । अविछिन्न रुपमा कृषिसम्बन्धी जानकारी सबै नेपालीलाई पुर्याउनको लागि हामी हरपल तत्पर रहेका छौँ । सबै नेपालीको साथ र सहयोगको अपेक्षासहित ।